Ongororo: Zvemukati Zvako Chigadzirwa Zvinofananidzwa? | Martech Zone
Rundown iri kuvhura inoenderera mberi yekutsvagisa musika nzira yezvigadzirwa nzira. Kunyange paine zvakawanda zvekutsvaga zviripo pachena zvine chekuita nekutengesa zvemukati zvese, pane zvishoma zvishoma ruzivo rwevanyanzvi vezvinyorwa kuti vashandise kutanga kwavo nzira yekugadzira, maitiro, zviwanikwa zvevashandi, mabasa, uye mabasa, uye tekinoroji. Rundown ichave ichiburitsa yakakosha yekuvandudza kune ino yakakosha data gore rese.
Rundown yakagadzira pfupi pfupiso yevashandi vezvinyorwa mune agency, muparidzi, uye zvikwata zvemukati zvemhando kuti vabatsire kujekesa kuti zvemukati zvinogadzirwa sei. Nguva yakareba, tichave tichishandisa data repasirese kubva kune vatengi vedu kuRundown kupa ruzivo rwakanyanya pamusoro pekuti masangano anowana sei kubva pane pfungwa kuenda kune zvemukati, inguvai inotora kuburitsa zvemukati, mhando dzezviri kuburitswa, uye mamwe akawanda madhata ane hukama. .
Nei uchifanira kutora chikamu: Kukura kwevateereri vako, kukura mari yako.
Mishumo yakapera uye inofambidzana infographics ichave inobatsira, inobatsira, uye inomanikidza ruzivo kune yega yega inogadzira zvemukati. Wese muongorori anotora mukana anowana kopi yemahara yemushumo uzere, kusanganisira zviono nezvakawanikwa pane zviwanikwa, mabasa, mabasa, tekinoroji, maturusi, mashandiro, kufambiswa kwebasa uye zvimwe zvezvikwata zvehunyanzvi zvemukati uye vagadziri.
Tora Zvemukati Zvekugadzira Ongororo
Tags: Chiratidzomaitiro ekugutsikanakugadzirwa kwemukatizvemukati kugadzirwa nzirakugutsikana kugadzirwazvemukati zvekugadzira bhenjizvemukati kugadzirwa ongororozvemukati nyanzvizvemukati zvemabasazvemukati zvemabasazvemukati vashandikuongororwa kwemukatizvemukati zvemuchinarundown